Home Wararka Dowlada Itoobiya oo ka hadashay booqashada Muse Bixi & xiriirka Farmaajo
Dowlada Itoobiya oo ka hortagysa wararka sheegaya in Itoobiya danaynayso dekada Zeylac ayaa waxa ay bilaabeen in ay si dadban saga fogeeyaan doodaas, inkastoo ay run tahay damaca Itoobiya ee Zeylac. Si Farmaajo culayska siyaasadeed looga qaado Farmaajo ayaa afhayeenka dowlada Itoobiya ka hadlay safarka Muse Bixi
Dhanka kale guddooomiyaha xisbiga Mucaaradka ee Waddani ayaa isna lagu warramayaa in safar ugu anbabaxay dalka Itoobbiya.
Wax faahfaahin oo dheeraad ah lagama bixin safarkaas.
Xarunta waxaa lagu tilmaamay inay tahay midda Afrika ugu wayn. cabirkeedu wuxuu yahay 149 hektar oo warshado keli ah ay ku yaallaan
Previous articleMadal looga soo horjeedo Qoor Qoor oo Muqdisho looga dhawaaqey
Next articleKooxo hubeysan oo dad shacab ah ku dilay duleedka magaaladda Gaalkacyo
Maleeshiyaadka Oromada oo dil iyo dhac ka gaystay deegaanka Soomaalida
Trump oo loo ogolaaday qorshe lagu dhimaayo Muhaajiriinta